"Ukugada": nabalingisi izindima. Incazelo ugobe
Uhlobo kinodetektiva, izindaba kwebugebengu ngokubaluleka kuthandwa ezweni lethu. ekuhleleka kwesinema Hlukanisa babe kahle kakhulu ngempela. A umnikelo ezinkulu kule ukwenze umbhali Andrey Konstantinov, kusukela ngaphansi kokuphatha kukabani ngepeni alizanga elidumile umphenyi indaba. On omunye wabo ekutshela ochungechungeni TV "ukubhekwa".
Umlando "ukukhangisa ongaphandle"
"Ukugada" Le filimu wadedelwa ngo-2012. Ingabe ewuchungechunge yethelevishini yasekhaya, wathwebula uhlobo zobugebengu umphenyi. Ukhuluma umlando kanye imininingwane yabo ngaphansi koMnyango ukubhekwa, okuyinto likhona nokwakheka Wezangaphakathi. Lena enye yezinhlobo ezingu amaphoyisa omshoshaphansi.
Le filimu, okuyinto beqashelwa ububanzi, esekelwe inoveli eponymous, amavolumu ezintathu umlobi odumile Andrey Konstantinov. Film indaba kwaqubula isithakazelo okwakungakaze kube khona izilaleli, nokunye hola udumo uchungechunge abadlali "ukubhekwa".
Uzungu lokhu umlando ifilimu ilula futhi ngesikhathi esifanayo kakhulu. Yena lumayelana isiphetho Heroine Julia Mankovskaya - uCaptain umnyango ukubhekwa uPauline. Kuyinto Ukukhuluma kuwufanele ukuthi usefuna ukuthethelelwa izimpendulo abasebenzisi abavamile kunethiwekhi, ngemva indima Mankovskaya abasha futhi ekhangayo babephathwa hhayi kuphela njengoba intombazane enhle, kodwa futhi njengoba actress okukhulu.
Ekuqaleni amafilimu uPolina ilahlekelwa lover wakhe nalowo asebenzisana naye - uSergei Peregudova iqhawe - Anton. Yena lishone kabuhlungu ngesikhathi umsebenzi esiyingozi - engamele lobugebengu. Ngemva kokufa Anton, uPauline ukuphila ibheke phansi. Wazibekela esithembisweni ngazo zonke izindlela ukuthola imbangela yokufa kwakhe. Okulandelayo uya laseSiberia mafia kumqashi, owafika anqobe Petersburg. Ngaphandle ngisho elinde Pauline iba yisisulu yakamuva uphenyo waleli bhizinisi yingozi lapho bathunjwa wakhe.
Zokuziphatha indaba ilula
Ngakule impi phakathi komthetho ubugebengu, amaphoyisa kanye ngesakhiwo isigebengu futhi lakha uchungechunge "ukubhekwa". Lo mlingisi ababedlala kuye, wayevele nakho izindaba umbhali Konstantinov.
Njengoba kushiwo ngenhla, umlobi noveli, elaba isisekelo se-TV i-movie "ukubhekwa", - Andrey Konstantinov. Kuyinto umbhali odumile waseRussia, eyaduma noveli yokuqala "Gangster Petersburg". Kwenziwa ibe movie, kodwa kwathi ngaphambili kakhulu, ngo-2000. Uchungechunge ngaphumelela okungakaze ulilethele inkazimulo umbhali abanamakhono.
Abanye abadlali of the film "ukubhekwa" wayeke kudlalwa ochungechungeni, kusekelwe amanoveli yilo kumbhali. Ngokwesibonelo, Yuliya Mankovskaya izinkanyezi ku ifilimu "Tula Tokarev", okuyilona elisebenzayo futhi umlobi indaba ubugebengu picturized. Ezincwadini zakhe zazenziwe ku amabhayisikobho, "amaqembu alwayo" futhi "Agency" ichashazi Golden. "
Umlingisi Maxim Drozd, ngubani okuxoxwe ngazo tape sebedlale uLieutenant Colonel Nesterov, inhloko UPauline lover wakhe oshonile, u-Anton, udume eminye imisebenzi. Yena baziwa kakhulu ukuthi ngemva kokukhululwa kwe tape "izindaba ezimbili mayelana nothando." Yakhe umsebenzi Filmography ku amafilimu "kabili Russian", "Umfowethu yomzalwane" nokunye. D. Manje esezikhiphe indima ebalulekile ifilimu "ukubhekwa". Abalingisi ababedlala kule umlando lobugebengu, oyokwanelisa abalandeli uhlobo. Uzungu, eduze ukuphila kwangempela, ithumba ukunakekelwa izilaleli sika kusukela ngomzuzu wokuqala futhi akavumeli hamba kuze kube credits zokugcina.
Ungakwazi ku umoya ofanayo ukubona umbukiso "ukubhekwa". Ngokuqinisekile Abalingisi ukuvula kubalandeli ngezindlela ezintsha. Uzokubona ezingeni ukuthi lase lihambile wesimanje Russian uchungechunge TV, futhi babe connoisseur uhlobo zobugebengu ewuchungechunge yethelevishini kweqiniso.
"Ukugada": nabalingisi izindima
Ngaphandle kwalabo sekuphawuliwe, ifilimu Starring nezinye abadlali ajwayelekile kuzithameli Russian. Omunye nendima Lev Tsveyg. Abaningi uyikhumbule ubugebengu uchungechunge "Opera". Wakhanyisa e ifilimu, futhi umlingisi oneminyaka engu-52 ubudala u-Oleg Geraskin, isikhathi eside wasebenza ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Muva nje, eziningi isuswe, hhayi kuphela e ithelevishini. Ngemva kokudedelwa "ukubhekwa" Geras'kin izinkanyezi ku ifilimu "isiphepho esikhulu seqhwa" (cameo), "zinkondlo ezimbili zasendulo", "ukuprakthiza".
Enye iqhawe yochungechunge "Opera", futhi ngesikhathi esisodwa-movie "Streets of Lights Broken 2" futhi "Bum", Artem Karasev oneminyaka engu-31 ubudala ngemuva "ukubhekwa" odlale iqhaza isici uchungechunge "Piranha Okulandelayo", eyakhishwa ngo-2014 .
Omunye izindima waya izidingo akukho isingeniso Daniilu Strahovu. Umamukeli honours eziningi kanye nemiklomelo, ifilimu kanye yaseshashalazini umlingisi abadlale indima Eugene imihlanga ochungechungeni TV "ukubhekwa".
It kungabonakala ifilimu movie futhi edumile yemidlalo futhi ifilimu umlingisi Sergey Gorobchenko. It is izvestven kahle izilaleli Russian salokhu tale "Amaphoyisa", kanye izithombe "Ash Waltz", "Gypsy Girl ukukhululwa." Gorobchenko iminyaka eminingi esebenza yaseshashalazini, "Lenk".
Abalingisi, ngubani kwakhanya ifilimu movie, kuyafaneleka neze ngisho ishidi elilodwa. Lena Nina Guseva, Yuri Nifontov, Artem Krylov, Fedor Dobronravov, uMichael Sedash nabanye abaningi.
Ithandwa izindaba ubugebengu
Ngempela, ukhonkolo inkanyezi kwenza isithombe ngendlela yaso eyingqayizivele. Eqinisweni, "ukubhekwa" evusa uhlobo zasekhaya TV ewuchungechunge uqobo ehlukile ngokuphelele, ezingeni eliphakeme. Indaba yakhelwe ubugebengu esiyinkimbinkimbi kwakwakhiwa futhi uchaza imithetho emhlabeni lobugebengu, ubunjalo izigcwelegcwele yesimanje, kanye anamandla nodumo kwabantu efanele ebhekene okubi, lifana imfanelo amasosha akwamanye amazwe.
Uhlobo kinodetektiva, izindaba kwebugebengu ngokubaluleka kuthandwa ezweni lethu. ekuhleleka kwesinema Hlukanisa babe kahle kakhulu ngempela. Futhi umnikelo ngokuthi ke wenza nje umbhali Andrey Konstantinov, kusukela ngaphansi kokuphatha kukabani ngepeni alizanga elidumile umphenyi indaba.
Uchungechunge oluthi "ukubhekwa" kunalokho eside. Sekukonke, sifaka iziqephu 24. Isikhathi ngasinye wabo - imizuzu engaba ngu-40. Phakathi nalesi sikhathi, ababukeli uzokwazi ujabulele umdlalo hhayi abadlali kuphela, kodwa futhi ukuze ubone eminingi izimpi, kwamaphenalti, imoto emsukela. Ngeke iphele uthando, izinhlungu kanye nokungakwazi ubuhlobo babantu.
Ngo ukuthwetshulwa abaqondisi ezinhlanu baba. Lokhu Yuri Nifontov, Igor Kopylov, Andrei Saveliev, Vasiliy Chiginsky futhi Vyacheslav Sorokin. Nifontov eyaziwa wamabhayisikobho "Ukwamukela esibhakabhakeni" futhi "Sawubona, Kinder!". Chiginsky - nombhali izimakethe ezingaphezu kwamakhulu amabili, owayebizwa ababandakanyeka kulesi sigameko imidwebo "streptocid Red" futhi "Mirror Izimpi. Njengoba ebonakalisa wokuqala. " Saveliev avela iqondiswe ezimbili iziqephu kwesizini yesishiyagalombili ochungechungeni "Foundry". It futhi waziwa ngokuba umbhali wemidlalo ye ifilimu "Tula-Tokarev," okuyinto esekelwe inoveli by Konstantinov. Sorokin kwaba co-nombhali "ebulalayo amandla-4", futhi Kopylov - "Goryunov amafilimu" futhi "Black Crow".
Ngubani Andrei Konstantinov?
Kuyinto umbhali yesimanje Russian futhi intatheli ukuthi imisebenzi kabani ethandwa ngenxa okwangempela indaba nesitayela akunakuqhathaniswa.
Igama lakhe langempela - Bakonin. Wazalelwa Andrei Dmitrievich eminyakeni engu-52 edlule esifundeni Astrakhan. Ekuqaleni ufuna ukuba Archeologist ke - njengoba uthisha umlando. Nokho, intando isiphetho kwaba enkonzweni yezempi, lapho iminyaka eminingi wayesebenza njengoba umhumushi okhokhelwayo. Esikhathini 90 zokuqala washiya isevisi futhi ngaqala ukusebenza njengoba intatheli eLeningrad. Uye ayesezikhundleni ahlukahlukene ezincwadini ezinkulu eziningana, kuhlanganise "I-Komsomolskaya Pravda". He is nombhali nophenyo eziningi lesibonwa. Kwaphela isikhathi eside inhloko yabangamashumi Petersburg Union of Journalists. Ingabe co-nombhali "Golden Ipeni" umklomelo lesibonwa. Wayevame unika emakilasini uhlanganyela nezingxoxo. Yena yanikezelwa umklomelo sikahulumeni, kanye izindondo eziningi. Ngokusho ngolwazi olungekho emthethweni, kuhanjiswa izincwadi zakhe kudlulwe amakhophi ayizigidi ezingu-20.
Marina Kim - TV impi nesifiso esinamandla sokuvelela
Anton Privolnaya: Biography of umethuli
Indlela eya Olympus inkanyezi, noma kanjani ukuthola indima ku-movie
Red Devil ngubani ukuthethisa indlovukazi? Thina ukwembula imfihlo ndawonye
Engaqondakali - kunjani? Inchazelo
Ubuthi 4 Abalingiswa: Kate. Incazelo yesimo, lapho ukuthola futhi kanjani nobuhlobo Kate
Mastitis: ekwelapheni amakhambi abantu. Mastitis e lactating omama: ukwelashwa. Licindezele ngesikhathi mastitis
Dowel-nail - kokungathembeki ephephile
Analog isebenze namalahle izingane
Beatniks - ke ... Ukubukeka, isiko kanye izincwadi Beat
Ukuthola: amazinga amabhange. Izibalo ngosizo amakhadi epulasitiki
Ungadliwa olungaqinile imvubelo inhlama